မင်းဘူးစကုမြို့ အာဇာနည်ကျောက်တိုင်ကွင်း ရင်ပြင်တွင် ထားရှိမည့် အာဇာနည် ကိုးဦး၏ ပုံတူကြေ?? - Yangon Media Group
မင်းဘူးစကုမြို့ အာဇာနည်ကျောက်တိုင်ကွင်း ရင်ပြင်တွင် ထားရှိမည့် အာဇာနည် ကိုးဦး၏ ပုံတူကြေ??
မန္တလေး၊ မေ ၃
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မင်းဘူးခရိုင် မင်းဘူး-စကုကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ စကု မြို့ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရှိ အာဇာ နည် ကျောက်တိုင်ကွင်း ရင်ပြင် တွင်ထားရှိမည့် အာဇာနည်ကိုး ဦးကြေးသွန်းပုံတူရုပ်တုများ မန္တ လေးမြို့တွင်ထုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ ”ဇွန်လကုန် အပြီးလုပ်နေ ပါတယ်။ အခုတော်တော်လေးပြီး နေပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုအပါအ ဝင်လေးရုပ်ကြေးသွန်း အချောကိုင် ပြီးပါပြီ။ ကျန်ငါးရုပ်ကပုံဖော်ပြီးပြီ ကြေးသွန်းဖို့ပဲ ကျန်တော့တာပါ။ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပါပြီး” ဟု မန္တလေးမြို့ ပြည့်ဝမြန်မာမှုကြေးသွန်းအနုပညာလုပ်ငန်းမှ ကြေး သွန်းပညာရှင် ကိုအောင်မိုးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကြေးသွန်းပုံတူ ရုပ်တုများ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ပြုလုပ်နေ ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံတူကြေးရုပ်တုမှာ အမြင့်သုံးပေ၊ ကျန်အာဇာနည်ရှစ်ဦး ကြေးရုပ်တုများမှာ ရုပ်တုတစ်ခုလျှင် နှစ်ပေစီရှိ ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေး ရုပ်တုကို ကြေးပိဿာချိန် ၅ဝ ကျော်၊ ကျန်အာဇာနည်ရှစ်ဦး ကြေးရုပ်တု များကိုတစ်ခုလျှင် ကြေးပိဿာချိန် ၁၅ ပိဿာကျော်အသုံးပြုသွန်းလုပ် ထားရာ စုစုပေါင်းကြေးပိဿာချိန် ၁၇ဝ ကျော်၊ ကုန်ကျစရိတ်ငွေကျပ် ၁၉၅ သိန်းကျော် ရှိသည်။
”ဦးရာဇတ် ပုံပဲထင်ထင်ရှား ရှားပုံတွေရှိတယ်။ ဦးဘဝင်းပုံဆို ခေါင်းငုံ့နေတဲ့ပုံပဲရှိတော့ အတည့် ပုံရဖို့ သေချာလေ့လာချိန်းဆပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံတူက အရင်တုန်းက ပိုက်ဆံတွေမှာ ပါတဲ့ ဗိုလ်ကေနဲ့ပုံကို ထုလုပ်ထား တာပါ။ အခြားအာဇာနည်ရှစ်ဦး ပုံက အားလုံးတွေ့နေမြင်နေကျ ပုံစံပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံက ထူးထူးခြား ခြား ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်ရမှာပါ” ဟု ပြည့်ဝကြေးသွန်းပညာရှင် ကိုအောင် မိုးက ပြောသည်။
စကုမြို့တွင်ထားရှိမည့် အာဇာနည်ကိုးဦးကြေးသွန်းပုံတူ ရုပ် တုကို မန္တလေးမြို့ ပြည့်ဝမြန်မာ မှုကြေးသွန်းအနုပညာလုပ်ငန်းက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်အပြီးအပ်နှံ နိုင်ရန်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါ ကြေးရုပ်တုများကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၉ ရက် (အာဇာနည်နေ့)တွင် ပြည်သူများလာရောက်အ လေးပြုနိုင်ရန် အာဇာနည်နေ့မတိုင် မီ အပြီးစိုက်ထူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အက်ဖ်အေဖလား ရယူနိုင်ရုံဖြင့် မလုံလောက်ဟု ဒီဂီယာပြော ဆို၊ မန်ယူသို့လာရန် မာတစ် ကတိပြုထားခြ?
ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် မဟာမုနိ ဝါဆိုခြင်းအလှခတ် ပွဲတော်ကို ယခုနှစ် ဝါထပ်သဖြ
ဆန်းချက်ဇ်မှာ ခူးခပ်ကျွေးရမည့် အဆင့်မျိုး မဟုတ်ဟု ဆိုးလ်ရှား ဆို